Umhlanganyeli ozisebenzayo: kuyini, izidingo nokuthi ungakwenza kanjani kube semthethweni | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 23/07/2021 08:56 | Umsebenzi
Kuya ngokuya kujwayeleka kakhulu ukuthi izinkampani ziqashe kancane bese zikhetha abasebenza ngokuzimela ukuthi bonge ekukhokheleni isisebenzi, amaholide, ukukhubazeka kwesikhashana, izimvume ... Wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ozisebenzelayo akanakho lokho ngoba kuthinta ngqo umnotho wabo. Kepha, okungenzeka ukuthi awukwazi ukuthi njenge-freelancer ilungu lomndeni wakho lingaba umhlanganyeli ozimele.
Kulungile manje Uyini umhlanganyeli ozimele? Yiziphi izidingo zakho? Kungenziwa kanjani? Sichaza konke kuwe.
1 Uyini umhlanganyeli ozimele
2 Yiziphi izidingo ukuze ube ngumhlanganyeli ozimele
3 Iziphi izinzuzo esinazo
4 Ungabhalisa kanjani njengomhlanganyeli ozimele
4.1 Okufanele kwenziwe umhlanganyeli ozisebenzelayo "wesikhathi esizayo"
4.2 Yini okufanele yenziwe ngumnikazi
Uyini umhlanganyeli ozimele
Into yokuqala okufanele uyazi ngomuntu osebenza ngokuzimela yilokho abakushoyo ngaleli gama. Ngokuqondile, sikhuluma ngomuntu ohlobene nomuntu ozisebenzayo, isihlobo esihlala futhi esisebenza naye ukumsiza ebhizinisini.
Eqinisweni, Kumele kuhlobene nezinga lesibili lokudla noma ukutholwa. Lokhu kusho ukuthi umhlanganyeli ozimele angaba umlingani, indodana, umzukulu, umfowethu, umkhulu, umlamu, umkhwe, njll.
Empeleni, kuyinhlanganisela yomuntu ozisebenzelayo ngoba kuzo zonke izinhloso lo muntu uzokhokhiswa intela njengomuntu oqashiwe yize ezobhaliswa njengomuntu ozisebenzelayo (ngakho-ke kuzofanele akhokhe imali).
Yiziphi izidingo ukuze ube ngumhlanganyeli ozimele
Yize ngaphambi kokuthi sizihlanze ezinye zezimfuneko eziyimpoqo, sizozichitha zonke ngoba ziningi:
Yiba isihlobo somnikazi ozisebenzayo. Njengoba sishilo ngaphambili, kuze kufike ezingeni lesibili lokudla noma ukutholwa.
Hlala endlini eyodwa futhi uncike kulo mnikazi ozisebenzayo. Ngamanye amagama, ilunga lomndeni alikwazi ukuzimela ngaphandle kokuziphilisa kwabo ngokuqhamuka emsebenzini abawenzayo nalowo muntu oziqashile.
Yenza umsebenzi wezikhathi ezithile, hhayi isikhathi esisodwa.
Ungabi ngaphansi kweminyaka engu-16 ubudala. Eqinisweni, kuze kufike u-2020 kwakukhona umkhawulo weminyaka (ubuningi bokuqashwa) kepha lokhu kususiwe futhi manje abahlanganyeli abazisebenzayo abaneminyaka engama-30, 40, 50 noma engama-60 bangaqashwa ngaphandle kwenkinga.
Ukuthi bobabili babhaliswe kwiRegime for Self-Employed Workers (RETA) nokuthi banikela inyanga nenyanga. Eqinisweni, kungavela ukungabaza kokuthi umuntu osebenzisana naye kumele azisebenzele yena okokuqala noma avunyelwe ukubhalisa yize sekuphele iminyaka enza lokho okokuqala (lapha ubuzokwazi ukuya Kwezokuphepha Komphakathi ukwazi isikali ngokuhumusha le mfuneko). Ngamanye amagama, akwaziwa ngempela uma enye yezidingo ukuthi isihlobo asikaze sizimele phambilini; noma ukuthi kunesikhathi lapho engazange azimele khona.
Ungabhaliswa njengomsebenzi. Lokho wukuthi, uma umhlanganyeli ozisebenzayo naye enomsebenzi njengesisebenzi, lokhu kumenza angafaneleki ukuba ngumhlanganyeli. Futhi, okwamanje, umthetho awusunguli imisebenzi eminingi yalolu hlobo lwesimo.
Iziphi izinzuzo esinazo
Yize lesi sibalo singaziwa kahle, iqiniso ukuthi sinamabhonasi amaningi. Isibonelo, owokuqala, futhi mhlawumbe oteleka kakhulu, iqiniso lokuthi kukhona i- Isaphulelo esingu-50% emalini ezizimele izinyanga eziphelele eziyi-18, inqobo nje uma kungumuntu omusha ozisebenzelayo. Futhi ngo-6 olandelayo ibhonasi izoba ngama-25%.
Ngaphezu kwalokho, kuzoba njalo ukhululiwe ekuthumeleni i-VAT yekota kanye nembuyiselo yentela yomuntu siqu, futhi okumele ukwenze nje ukubuyisa intela yentela.
Manje kunento eyodwa engemihle. Futhi ukuthi leli qembu alikwazi ukufinyelela isilinganiso esiphansi sama-euro angama-50, njengoba abanye abantu abasha abazisebenzayo benenketho.
Kumuntu oziqashile, ungacabanga ukuthi azikho izinzuzo, ngoba kuzodingeka bakhokhe imali yabo kanye naleyo yesihlobo, ngaphezu komholo wabo. Kepha kufanele ukwazi lokho umholo kamuva urekhodwa njengezindleko ezingadonswa ekubuyisweni kwentela, okuyinto enhle kubo.
Kepha akugcini lapho. Uzoba ne- ibhonasi yemali yebhizinisi yezimo ezivamile zezinyanga eziyi-12 inqobo nje uma kuyisivumelwano saphakade. Futhi ungakufeza kanjani lokho? Yebo, kufanele uqiniseke ukuthi umhlanganyeli ozisebenzayo akazange aqashwe ngaphambili ngaphansi kwalesi sibalo (esikhathini esiyiminyaka engu-5). Manje, lesi simo kufanele sigcinwe okungenani izinyanga eziyisithupha, futhi ukuphela kwendlela yokusiqeda kungaba:
Ingqikithi yokukhubazeka unomphela.
Ukuqedwa komsebenzi, isevisi noma iphrojekthi.
Ungabhalisa kanjani njengomhlanganyeli ozimele
Uma ngemuva kwakho konke esikhulume ngakho, ucabanga ukuthi lesi sibalo singesinye sezinto ezinhle kakhulu ecaleni lakho, kufanele wazi ukuthi izinqubo zokwenza zikhulu kakhulu, kulula kakhulu ukuzenza. Vele, bobabili umnikazi ozimele nalowo ozoba ngumhlanganyeli ozisebenzayo kumele benze lokho.
Okufanele kwenziwe umhlanganyeli ozisebenzelayo "wesikhathi esizayo"
Noma yikuphi. Ngakho-ke, ngaphandle kokuqhubeka. Umuntu ozoba ngumhlanganyeli ozimele akudingeki enze lutho. Akudingeki ubhalise ne-RETA, noma ne-Agency Agency.
Konke lokhu kwehlela kumnikazi ozisebenzelayo okunguye okufanele enze inqubo, kepha sesiyakutshela ukuthi kulula kakhulu futhi kwenziwa ngemizuzu.
Yini okufanele yenziwe ngumnikazi
Manje ake sikhulume ngomnikazi, umuntu "oqasha" ngandlela thile ilungu lomndeni wakhe. Into yokuqala okudingeka uyenze ukwethula i- imodeli TA0521 / 2, kungaba mathupha ekuphathweni Kwezokuphepha Komphakathi noma wenze le nkulumo online ngewebhusayithi yabo.
Kulo mbhalo, okwenziwayo ukwazisa Ezokuphepha Komphakathi ukuthi kukhona ushintsho, okungaba ukuthatha ozisebenzelayo ozisebenzelayo. Ukuze wenze lokhu, uzodinga okulandelayo:
Umazisi waleso sihlobo.
Ukubhaliswa kwakho noMgcinimafa (njengomnikazi).
Akukho okunye, uma le nqubo seyithunyelwe, ilungu lomndeni wakho selizobhekwa njengomhlanganyeli ozimele futhi kufanele ukhokhe imali yalokhu (nebhonasi ekhona, kunjalo) ngaphezu komholo. Futhi yebo, kubalulekile ukuthi umnikeze inkokhelo yenyanga nenyanga ngoba le mibhalo izodingeka ngokuhamba kwesikhathi ukwenza isitatimende semali engenayo sonyaka.
Manje njengoba usazi isibalo somhlanganyeli ozisebenzayo, ingabe usibona sisebenza esimeni sakho? Sazise.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Umhlanganyeli ozisebenzayo